Chinja mushandisi otomatiki pane yako Apple TV nekuda kweKfupikiso muTVOS 14 | IPhone nhau
Chinja mushandisi otomatiki pane yako Apple TV nekuda kweKfupikiso muTVOS 14
Ngirozi Gonzalez | | Apple tv, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Apple TV chishandiso icho kumhuri dzakawanda chakakosha. Kuve nenzvimbo kwaunogona kuve neyako ese ekushandisa, ekushambadzira masevhisi uye audiovisual zvemukati inzira yakanaka yekushandisa ichi Apple chigadzirwa. Kutenda kune iyo yekuvandudza yakagamuchirwa gore rapfuura, tvOS 13, iwo e Cupertino akawedzera akawanda-mushandisi system kubvumira mhuri kuti dzienzanise zvemukati zvadzo. Kusvika kwemabetas e tvOS 14, iOS uye iPadOS 14 inobvumidza iwe kuita mitsva mabasa kutenderedza mushandisi maakaundi uchishandisa Mapfupi. Isu tinokudzidzisa iwe maitiro ekushandura otomatiki vashandisi kuburikidza neyakareruka nzira.
Kutora mukana weizvo zvitsva muTVOS 14: mushandisi maakaunzi uye Mapfupi
Apple yeruzhinji beta chirongwa inobvumidza vashandisi vasina account yekuvandudza gadza iyo nyowani yekushandisa masystem mune beta fomu. Izvi zvinokutendera iwe kunatsiridza mabhugi uye ruzivo mune yekutanga vhezheni kuti iyo yekupedzisira vhezheni ive yakanatswa sezvinobvira maererano nemaitiro uye mashandiro. Kutevera iyi dzidziso inofanirwa kuve ne iPad kana iPhone ine iOS kana iPadOS 14 uye a Apple TV ine tvOS 14.
Muchidimbu, izvo zvatinoda kuwana ndeizvi chinja account yemushandisi yeApple TV yedu Kutenda kumaShortcuts matsva akaisirwa muIOS uye iPadOS 14. Icho chinhu chitsva sezvo Apple yakaunza mukana uyu mumabheja matsva akurukurwa pamusoro apa kunyangwe iyo yakawanda-mushandisi basa, sezvatamboreva, yaive yatowanikwa muTVOS 13.
Kutanga, tinovhura iyo Shortcuts application pane yedu iDevice uye tinya pane '+' kuti ugadzire iyo pfupi nzira. Padivi rerudyi tichaenda tichitsvaga muinjini yekutsvaga 'Chinja Mushandisi Akaundi'. Ichi ndicho chinhu chatinogona kugadzirisa kuti tishandure mushandisi. Tinodzvanya pairi kuruboshwe kana ichinge yawedzerwa mukufambiswa kwebasa. Kana yangovhurwa, menyu inozoratidzwa kuti igadzirise iyo Apple TV uye ndeupi mushandisi watinofanira kuchinja. Isu tinoshandura zita reiyo nzira pfupi nekudzvanya pane 'Mutsva nzira' muhafu yekumusoro kwechidzitiro.
Isu tinopedzisa iyo nzira ipfupi nekudzvanya pa 'Yangu Mapfupi' uye nekudzvanya pane 'Sevha Ipfupi'. Kana isu tikadzvanya pachiratidziro chepamusha cheiyo Shortcuts app yatakagadzira, inochinja mushandisi pane yedu Apple TV. Iyi nzira yekupedzisira inoda kuti tinyore pairi kuti tishandure mushandisi. Nekudaro, isu tinogona kutamba nekufambiswa kwebasa kuitira kuti zvimhanye otomatiki kana tasvika kumba kana patinoita chimwe chiito.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » Chinja mushandisi otomatiki pane yako Apple TV nekuda kweKfupikiso muTVOS 14
Gumi nembiri maSouth anotangisa inoshamisa BookBook kesi yeiyo nyowani iPad Pro neMagic Khibhodi
Aya ndiwo matatu zvinyorwa zvitsva zvinouya kuApple TV +